Ihowuliseyili iCVV-19 Antigen Rapid Test (iLatex) yomvelisi kunye nabathengisi | Ukudibanisa
I-JOINSTATR COVID-19 ANTIGEN RAPID TEST ineziqinisekiso ezipheleleyo zokuthumela kwelinye ilizwe; -ngangenisi amathe (oropharyngeal), isikhohlela kunye nelindle kunokufunyanwa, ukuxilongwa kwangoko kuyayiqinisekisa ingqondo yakho
● Ukuveliswa kwamanye amazwe, ukufumanisa ngqo kwiprotheyini ye-pathogen S, engachaphazelekiyo kuguquko lwentsholongwane, ubuntununtunu obuphezulu kunye nokucaciswa, kwaye inokusetyenziselwa ukuhlolwa kwangoko;
● Ukwenza isampulu ngokukuko nangokungenabungozi. Uhlobo lwe-specimen: i-oropharyngeal saliva / isikhohlela / isitulo, esinokusetyenziselwa ukuzihlola ekhaya ngexesha lokuvalelwa yedwa, kunye nokuvavanywa ngaphambi kokuqalisa komsebenzi kunye nesikolo; Ukuvavanywa okungafunekiyo kulungele ukubekwa esweni okuqhubekayo kwabantwana kunye nabantu abadala;
● Indlela yenyathelo elinye, kulula ukuyisebenzisa, ukunciphisa uhlolo oluphosakeleyo okanye olungelulo olubangelwa ziimpazamo zomqhubi;
● Akukho zixhobo zifunekayo, ukufunyanwa ngokukhawuleza, iziphumo ziyafumaneka kwimizuzu eyi-10-15;
● Ubushushu bokugcina: 2 ~ 30 ℃. Akukho zithuthi zithunyelwayo zibanda;
● Ukucaciswa: 1 uvavanyo / ibhokisi okanye iimvavanyo ezingama-25 / ibhokisi;
● Iindlela zokubambisana ezahlukeneyo: I-OEM / i-ODM yamkelwe.
Uvavanyo lwe-COVID-19 lwe-Antigen ekhawulezayo（ILatex）
Amathe e-Oropharyngeal / isikhohlela / isitulo
Uvavanyo lwe-25 / ibhokisi, uvavanyo lwe-1 / ibhokisi
Iindlela ezahlukeneyo zentsebenziswano
● Iinoveli coronaviruses zezendidi. I-COVID-19 sisifo esosulelayo sokuphefumla. Ngokuqhelekileyo abantu bayachaphazeleka. Okwangoku, izigulana ezisulelwe yinoveli yecoronavirus zezona zinto ziphambili kusulelo; Abantu abosulelekileyo abangenagciwane banokuba sisifo esosulelayo. Ngokusekwe kuphando lwangoku lwe-epidemiological, ixesha lokuxubusha ziintsuku ezi-1 ukuya kwezi-14, ubukhulu becala iintsuku ezi-3 ukuya kwezi-7. Iimpawu eziphambili zibandakanya umkhuhlane, ukudinwa kunye nokukhohlela okomileyo. Ukudibana kwempumlo, impumlo ebusayo, umqala obuhlungu, i-myalgia kunye norhudo zifumaneka kwiimeko ezimbalwa.
● I-coronavirus yenoveli ingena kwiiseli zomntu ngokubopha okuthile kwe-spike glycoprotein (ligand) kwi-ACE2 receptor ebekwe kwi-membrane yeselula yomntu. Kolu vavanyo i-ACE2 receptor ithathelwe indawo yintsholongwane ukuze kusekwe inoveli ye-ligand-receptor chromatography kit yokufumanisa ngokukhawuleza inoveli coronavirus.
Egqithileyo Uvavanyo lwe-COVID-19 Antigen Rapid (Colloidal Gold) -iPostior Oropharyngeal Saliva
Okulandelayo: SARS-CoV-2 Umkhuhlane A & B Uvavanyo lwe-Antigen Rapid